Ukuphupha i-Achilles tendon Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ithenda ye-Achilles yeyona toni inkulu kwaye yomeleleyo ebantwini. Kwangelo xesha, yindawo ebuthathaka kakhulu, njengoko ibaleka ngasemva kwesithende. Ukuba yaphukile okanye yenzakele kwingozi, asinakufane silubeke unyawo olunye phambi kolunye. Nangona kunjalo, oku kuya kwenzeka kuphela emva kwexesha elide lokuxina, njengoko ngamanye amaxesha kusenzeka kwezemidlalo, umzekelo. Ithenda ye-Achilles esempilweni engakhange yonakaliswe kukulayisha okungalunganga okanye iimpembelelo zangaphandle zinokumelana namandla amakhulu.
Igama le-Achilles tendon libuyela kwiqhawe i-Achilles yeentsomi zamaGrike, ekuphela kwendawo eyabuthathaka yayisithende sakhe. Ngaba oku sele kungumqondiso wendlela i-Achilles tendon enokuqondwa ngayo njengomqondiso wephupha? Ithetha ntoni iphupha malunga nalo xa siphupha i-Achilles tendon?
1 Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ithenda ye-Achilles njengophawu lwephupha ibhekisa kwinxalenye ebuthathaka kakhulu okanye ethe-ethe yephupha. Oku indawo ebuthathaka Inokunxulumana nobuntu balowo uphuphayo, inezinto ezithile ezenza ukuba ibe sesichengeni. Ngokuqinisekileyo uyazazi ezi zinto kunye, kodwa kufanelekile ukuba usebenza ngakumbi kuwe. Ukuba ukuphupha kuyazenzakalisa kwiphupha lakho kwi-Achilles tendon, oku kwalatha kwelinye Uxinzelelo ngaphandle, awukwazi ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo ngoku.
Umfanekiso wephupha ungabonisa ubuthathaka kwicala lakho, kuba uyaxhatshazwa ngabanye abantu, uloyiko lunokuvakaliswa ephupheni ukuba amanqaku akho obuthathaka aya kufunyanwa. Ngamanye amaxesha, iphupha malunga ne-Achilles tendon linokubonisa ngomonakalo olindelekileyo okanye ingozi esondeleyo.
Ukuba iphupha lenzakalisa umntu kwi-Achilles tendon, oku kuhlala kubonisa isilumkiso sokuba ungenzi ngaphandle kokucinga. Iintshaba ukuthobela.
Ubuthathaka obuziswe yi-Achilles tendon akusoloko kufuneka buthathaka isimilo. Enye into enokuchazwa kukuba amaphupha acwangcisa iprojekthi, oku iplani nangona kunjalo inendawo ebuthathaka. Iphupha kusenokwenzeka ukuba liphose iinkcukacha ezibalulekileyo okanye lacinga gwenxa ngento ethile. Iphupha likuxwayisa ukuba uphinde uziqwalasele izicwangciso zakho.
Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha lukhomba kwi uloyiko yokuphupha. Uzibona engonelanga, ebubetha ngoyaba ubuthathaka kunye neempazamo ezincinci. Emehlweni akhe sele eza kutyhilwa ngalo lonke ixesha, uyalinda kwaye oyike umzuzu xa abanye befumanisa indawo yakhe ebuthathaka, isithende sakhe i-Achilles. Engqondweni yakhe, baya kumxhaphaza okanye bamonzakalise ngenye indlela, ke kufuneka agcine amacala akhe abuthathaka eyimfihlo kangangoko.
Ngamanye amaxesha, i-Achilles tendon inokuba nefayile ye- ukuqonda okubuthathaka Yovuko. Iphupha livakalelwa kukuba kufuneka liziphathe ngendlela evulekileyo nengacacanga, mhlawumbi ikwajonga ukungachasani kwabanye.
Uphawu lwephupha «Achilles tendon» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, i-Achilles tendon ivula ephupheni. ubuthathaka bethu Ukuqonda, ukuphupha kusenokuphucula ukukhula kwakho ngokomoya.